အဝတ်အထည်နှင့် အဆင်တန်ဆာများ - hello kitty bag Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အဝတ်အထည်နှင့် အဆင်တန်ဆာများ classified: အသစ် Hello Kitty Bag
"ဘယ်သွားသွားဆောင်ထားမမှားမယ့်အရာ " _____________________________ ခရီးသွားမလား⁉ပြည်တွင်းခရီးစဥ်လား⁉ ဘယ်နေရာသွားသွား ဆောင်ထားရင်မမှားဘူးလေ❗ 💚တစ်အိတ်ထဲနဲ့တင် သယ်ဆောင်ရမယ့်ပစ္စည်းဝန်ကို ခံနိုင်တယ် ... 💙အိတ်သားကလည်းပေးရတယ့်စျေးနဲ့တန်တယ် 💜လှကလည်းလှ အရောင်လေးတွေကလည်း မမ များအကြိုက်ဆိုတော့ 💥အခုပဲ ဆက်သွယ်မှာယူလိုက်တော့နော်....အရောင်လေးတွေက ဦးသူရမှာမို့ လိုချင်တဲ့အရောင်မရရင် မင်မင်တို့ကို အချစ်မပျက်ရဘူးနော်😘 ဝယ်ယူလိုပါက.... Page Cb မှာယူနိုင်သလို Onekyat app / Instagram app နှင့် Myanmarkt.com စသည့် website များတွင်လည်း အားပေးဝယ်ယူနိုင်ပါပြီနော်... နယ်မြို့ များအတွက်ကတော့ order ကြိုတင်ပြီး ငွေကြိုလွှဲစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး နယ်မြို့များအား သုံးရက်အတွင်းပို့ဆောင်ပေးပါတယ်ရှင်။🚗 ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကတော့အိမ်ရောက်ငွေရှင်းစနစ်လေးဖြင့်မှာယူနိုင်ပါတယ်နော်... မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်. ✈ မှာယူရန်... 📞 -09763873764 📞-09699339442(Viber)